Drogba oo shaaca ka qaaday labo xiddig uu u arko in mustaqbalka ay ku guuleysan karaan Ballon d’Or – Gool FM
Drogba oo shaaca ka qaaday labo xiddig uu u arko in mustaqbalka ay ku guuleysan karaan Ballon d’Or
(Yurub) 28 Sebt 2019. Halyeeyga kooxda Chelsea iyo xulka qaranka Ivory Coast ee Didier Drogba ayaa u sharaxay abaal-marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or, inay ku guuleysan karaan labada xiddig ka tirsan kooxda Paris Saint – Germain ee Neymar Jr iyo Kylian Mbappé.
Xiddigaha Neymar Jr iyo Kylian Mbappé ayaa door muhiim ah ka ciyaaray guulaha kooxda Paris St Germain, iyadoo uu Mbappé dhaliyay 33 gool oo horyaalka France Ligue 1 ah xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Halka xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr uu dhaliyay 15 gool, inkastoo ay dhaawacyadiisa noqdeen kuwo joogta ah.
Haddaba Didier Drogba ayaa amaaney iskaashiga dhanka weerarka ah ee u dhaxeeya xiddigaha Neymar Jr iyo Kylian Mbappé, isagoo xaqiijiyay in mustaqbalka dhow ay gacanta ku dhigi doonaan abaal-marinta Ballon d’Or.
Didier Drogba ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu hadalkiisa ku bilaabay:
“Haa, Neymar iyo Mbappé waxay ku guuleysan doonaan abaal-marinta Ballon d’Or maalin maalmaha ka mid ah, waxay qeyb ka yihiin koox yar ay ka mid yihiin ciyaartoy badan oo xirfadooda kubadda cagta aan caadi aheyn, adduunka aad bay uga yaryihiin in la helo”.
“Neymar wuxuu jecel yahay inuu helo boos si uu u dhaqaaqo sidii Mbappé oo kale, iskaashigooda waa laba nin oo aad ufiican, waxaan daawadaa marka ay wada joogaan sidaas darteed marwalba midba midka kale ayuu raadiyaa” ayuu hadalkiisa ku soo xiray halyeeyga Didier Drogba.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Sheffield United iyo Liverpool ee horyaalka Premier League
Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka caawa ee Madrid Derby